जहीँतहीँ ठगिनु नेपालीकै भाग्य	मध्यान्हको समयमा महेन्द्रनगर पुगेँ । राजधानीबाट अघिल्लोदिन ४ बजेबाट हुँइकिएको बस बल्ल रोकियो । झण्डै २० घण्टे यात्रामा अनेक बाटा र गाउँबस्ती नियाल्दै आयौं । मध्यरातमा परासीभन्दा केहीपर दलदलेमा खाना खाएका थियौ । निकै उग्र गर्मीका कारण ज्यान शिथिल र पसिनाको मापन गर्न सकेनौं । अकस्मात्को यो भ्रमण र लामो यात्रालाई उत्साहित हुँदै अंगालेको छु । योजना मुताबिक महेन्द्रनगर पुगेकै दिन नेपाल छोड्ने कुरो थियो ।
टाँगा चढ्यौं । टाँगा तान्ने बहादुरको नाम ‘बादल’ । टाँगावालाले दैनिक एकपटक आवतजावत गर्दा रहेछन् नाका । अझ उनले १२ बजेपछि मात्रै भारत प्रवेश गर्न बताउँदै घण्टौ हाम्रो यात्रालाई ढिलो बनाए । ढिलै भएपनि टाँगा अघि बढ्यो । गड्डाचौकी छिचोल्दै पार गर्न क्रममा भारतीय प्रहरीको उपस्थिती नेपालकै नाकामा देखियो । कति मिचेका यिनीहरूले ? भारतमा एक दशकदेखि कार्यरत भरत नेपाली हामीसँगै थिए । उनको यो बोली हरेक नेपालीलाई चसक्क बिझ्नु स्वाभाविक हो नै । तर माथिल्ला पदका ठूलाले कहिल्यै देख्दैनन् । ५५ वर्षीय उनले भने, ‘हामीलाई अर्काको ठाउँमा हेपिएर कमाउन रहर छैन, बाध्यता छ । देश चलाउनेहरूले यसबारे कहिल्यै सोचेनन् ।’ एसएसबीको सुरक्षा जाँच नेपालकै भूमिमा नै छ । अघि बढ्यौ र भारतीय प्रहरीको दस्ता क्याम्पमा रोकियौं । यही मौकामा आँखाहरू वरिपरि डुल्न थाल्यो । कति बहादुर रहेछन् भारतीय प्रहरीहरू । खुल्लमखुल्ला घुस मागिरहेका छन् । आफ्नै फाईदाका हिसाब राखेरै होला आवतजावत गर्नहरूले पनि दिइरहेका छन् खुसुक्क ।
’दिने कहाँ नै संकट‘ ग्याँस, पेट्रोल र बिजुलीको समस्याले भारतको उत्तराखण्डमा व्यापक समस्या परेको छ । उत्तराखण्डका दर्जनौ स्थानहरूमा ग्याँसका रित्ता सिलिण्डरको लाईन छन् । पेट्रोल पम्ममा सयौं साधनहरूको लश्कर छन् । चौबिसै घण्टा बिजुलीको उपलब्ध हुनसकेको छैन । १३२ केबी बाँडिएको बिजुलीले धान्न नसक्दा उत्तराखण्डका दर्जनौ क्षेत्रमा बिजुलीको समस्या परेको हो । विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमा व्यवस्था गर्न नसकेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
मेरो भ्रमणको विषय समाचारनै हो । यसबारे पछिका अंकहरूमा उल्लेख गर्छु । केही रिपोर्ट सिध्याएर नेपाल फर्किने दिन आयो । नेपालीहरू स्वदेश फर्किने बेला नाकाको सम्झनाले झस्किँदा रहेछन् । मलाई पनि यस्तै महसुस भयो । पूर्व भित्रिएको नाकासम्म पुग्न अघिल्लो चरणमा जस्तै बनवासाबाट टाँगा चढ्दै नाका पुगेँ । यो नाकाबाट पाँचसय र हजारका भारतीय नोट ल्याउने नमिल्ने प्रावधान कडारूपमा लागु गरिएको छ ।
This entry was posted on सेप्टेम्बर 6, 2012 at 4:28 अपराह्न and is filed under मेरो लेख. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	ट्यागहरु: उत्तराखण्ड, नैनीताल	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.